“Ala ga-emepụta ihe nke ọma; Chineke bụ́ Chineke anyị ga-agọzi anyị.”​—Abụ Ọma 67:6
Chineke kwere Ebreham onye amụma nkwa na otu n’ime ụmụ ya ga-agọzi “mba niile nke ụwa.” (Jenesis 22:18) Ònye ka nwa ahụ ga-abụ?
Ihe fọrọ obere ka o ruo puku afọ abụọ gara aga, Chineke nyere Jizọs, bụ́ nwa Ebreham ike o ji rụọ ọrụ ebube dị iche iche. Ọrụ ebube ndị ahụ gosiri na Chineke ga-esi n’aka Jizọs gọzie mba niile ma si otú ahụ mezuo nkwa ahụ o kwere Ebreham.​—Ndị Galeshia 3:14.
Ọrụ ebube ndị ahụ Jizọs rụrụ nyeere ndị mmadụ aka ịmata na ọ bụ ya bụ onye Chineke ga-esi n’aka ya gọzie ụmụ mmadụ. Ha gosikwara otú Chineke ga-esi jiri ya gọzie ụmụ mmadụ ruo mgbe ebighị ebi. Legodị otú ọrụ ebube ndị ahụ Jizọs rụrụ si mee ka anyị mata ụfọdụ àgwà ndị magburu onwe ha o nwere.
Obiọma​—Jizọs gwọrọ ndị ọrịa.
E nwere mgbe otu onye ekpenta rịọrọ Jizọs ka ọ gwọọ ya. Jizọs bitụrụ ya aka ma gwa ya, sị: “Achọrọ m.” Ekpenta ahụ pụrụ n’ahụ́ ya ozugbo.​—Mak 1:​40-42.
Mmesapụ aka​—Jizọs nyere ndị agụụ ji nri.
Jizọs achọghị ka agụụ na-anyụ ndị mmadụ ịkpakwụ. O nyere ọtụtụ puku mmadụ nri ihe karịrị otu ugboro. Otú o si mee ya bụ na o mere ka achịcha ole na ole na azụ̀ ole na ole dị ọtụtụ. (Matiu 14:​17-21; 15:​32-38) Ha niile richara nri ahụ rijuo afọ. Ha rifọkwara nri buru ibu.
Ọmịiko​—Jizọs kpọlitere ndị nwụrụ anwụ.
Jizọs kpọlitere otu mkpụrụ nwa nwoke nke otu nwaanyị di ya nwụrụ na-eru uju n’ihi na “o nwere ọmịiko.” Nwaanyị a enweghị onye ọzọ ga-elekọta ya.​—Luk 7:​12-15.
NGỌZI NDỊ A GA-ENWE N’ỤWA RUO MGBE EBIGHỊ EBI
Jizọs egosila na Chineke nwere ike ọ ga-eji agọzi ụmụ mmadụ. N’oge na-adịghị anya, mgbe Jizọs ga-alọghachi otú o kwuru, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ga-eji ya rụọdị ọtụtụ ọrụ ebube n’ụwa niile.
Olee otú ihe ga-adị n’ụwa mgbe Chineke ga-emezu nkwa ahụ o kwere Ebreham? Ndị hụrụ Chineke n’anya ma na-akwanyere ya ùgwù “ga-enweta ụwa.” Ha ga-enwekwa “obi ụtọ dị ukwuu n’ihi udo nke zuru ebe niile.” (Abụ Ọma 37:11) “Ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ.”​—Mkpughe 21:4.
Obi ga-atọgbu anyị atọgbu ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi mgbe udo ga-adị n’ụwa. Anyị na-agba gị ume ka ị gaa na www.jw.org mụtakwuo gbasara ngọzi ndị ahụ ọchịchị Chineke ga-eweta n’oge na-adịghị anya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Onye Kere Anyị Ga-agọzi Gị Ruo Mgbe Ebighị Ebi
wp20 nke 3 p. 14-15